कान्ति अस्पताल छोड्दै स्वास्थ्यकर्मी, निर्देशक भन्छन् : सेवासुविधाको कमीले टिकाउनै सकिएन – Health Post Nepal
कान्ति अस्पताल छोड्दै स्वास्थ्यकर्मी, निर्देशक भन्छन् : सेवासुविधाको कमीले टिकाउनै सकिएन
२०७८ असोज १२ गते १३:१०
कान्ति बाल अस्पतालमा करारका कर्मचारीले छोड्दै जाने प्रवृत्ति बढेपछि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा थप समस्या पर्दै गएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. अजित रायमाझीले कान्तिमा भन्दा अरू सरकारी अस्पतालमै तलबसहित अन्य सेवासुविधा पाएपछि जनशक्तिलाई टिकाउन नसकिएको गुनासो गरे।
उसो त, अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीको कमी छ। २० वर्षअघिको दरबन्दीमा कर्मचारीले अस्पतालमा सेवा धानिरहेका छन्। ‘यसबीचमा काठमाडौंको जनसंख्या तीन गुणाले बढिसकेको छ। तर, त्यही जनशक्ति र त्यही पूर्वाधारमा बालबालिकालाई उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डा. रायमाझी भन्छन्।
अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति अभावकै कारणले थप सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। अस्पतालमा हाल सरकारी दरबन्दी ८५ र अस्पताल विकास समितिका तर्फ १७० नर्सिङ स्टाफ छन्।
डा. रायमाझीकाअनुसार बिरामीको अनुपातमा गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि ३ सयभन्दा बढी नर्सिङ दरबन्दीको आवश्यकता पर्छ।
‘करारमा भएका जनशक्ति जहाँ सेवा बढी भयो उतै आकर्षित हुन्छन्। सरकारी दरबन्दी पनि दुई दशक यता थपिएको छैन। सेवासुविधाकै कमीले नर्स मात्र होइन, चिकित्सक पनि छोडेर जाने क्रम बढ्दो छ,’ डा. रायमाझी गुनासो गर्छन।
चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (वीर), त्रिवि शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा थप सेवासुविधा तथा भत्ताका कारण नर्सिङ तथा चिकित्सकीय जनशक्ति कान्ति छोडेर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो।
अन्य अस्पतालले स्वास्थ्य कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने लोभलाग्दो सेवासुविधा तथा भत्ताका कारण कान्तिका कर्मचारी पनि उतैतिर आकर्षित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
डा. अजित रायमाझी
देशको एकमात्र सरकारी बाल अस्पतालमा देशका कुनाकाप्चाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा सेवा लिन बिरामी कान्तिमा आउँछन्। हाल कान्तिले ५२ बेडको आइसियु सञ्चालन गरेको छ। तर, बिरामीको चाप हेर्दा सय बेड सञ्चालन गरे पनि अपुग नै हुने देखिन्छ।
अन्य निजी अस्पतालमा उपचार सेवा महंगो भएकाले धेरै घुइँचो कान्तिमा लाग्ने गरेको छ। कान्तिमा मात्रै ओपिडी सेवा लिनका लागि ७ घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई प्राथमिकतामा नराख्नु तथा नेतृत्वदायी क्षमता कमजोर भएकै कारण अस्पतालको सुधार हुन नसकेको कर्मचारीको आरोप छ।
उसो त, कर्मचारीको पनि कान्तिमा मनपरीतन्त्र हावी भएको देखिन्छ। अस्पतालमा भन्दा बढी समय क्लिनिकमा चिकित्सकले बिताउने तथा ड्युटी समय राम्रोसँग निर्वाह नगर्ने जस्ता विभिन्न कारणले पनि अस्पतालको सेवा विस्तार हुन सकेको छैन।
अस्पतालमा बेड अभावकै कारण दर्जनौं बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सक बताउँछन्। डा. रायमाझीले करारमा राखेका ५६ जनाभन्दा बढी नर्स तथा चिकित्सकले कान्ति छोडिसकेका छन्।
‘हामीले परीक्षा गराएरै दक्ष जनशक्ति लिएका हुन्छौं। हामीकहाँ सरकारले तोकेको मात्र तलब छ। तर, अन्य अस्पतालले थप सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण पनि जनशक्तिलाई टिकाउन सकिएको छैन,’ उनले भने।
उनकाअनुसार सरकारबाट उपलब्ध भएको बजेटले अस्पताल सञ्चालन गर्नमासमेत कठिन पर्ने हुन्छ। जनशक्ति अभावकै कारण गर्भवती नर्सलेसमेत दिनरात काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नर्सिङ प्रमुख कविता पाण्डे बताउँछिन्।
कोरोना महामारीका कारण अधिकांस नर्सहरु संक्रमित भएका थिए। उनीहरूले आरामसमेत गर्न पाएनन्। ‘अस्वस्थ भएको बेलामा पनि नर्सलाई बोलाउन पर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि जनशक्ति अभावकै कारण गर्भवती हुने नर्सलाईसमेत काम लगाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ पाण्डे थप्छिन्,
‘बिदा दिएको खण्डमा बिरामीले उपचार पाउँदैनन्। लामो समयदेखि अध्ययन बिदासमेत दिन सकिएको छैन। नर्सले दिनरात काम गरे पनि थप सेवासुविधा छैन।’